Nepali Music News – Fursad Nepal
Featured, Nepali Music News, Nepali Music Videos Comments Off on अमृत र संगीताको यस्तो छ ‘मग मग’
भ्यालेन्टाइन डे लाई लक्षित गर्दै गायक अमृत छेत्रीले आफ्नो स्वरमा सजिएको गीत ‘मग मग’ लिएर आएका छन् । गीतमा अमृतसंगै उनकै श्रीमती संगीता छेत्रीमाथी फिचरिङ गरिएको छ । गीतको भिडियोमा यी दुईको प्रेम देख्न सकिन्छ । गीतले प्रेमको नै चर्चा गरेको छ । गीतलाई माया गर्ने जोडीले रुचाउने विश्वास गायक छेत्रीको रहेको छ । गीतमा माया आभास गराउने मोमेन्ट राखिएको छ …
Featured, Nepali Music News, Nepali Music Videos Comments Off on एलिशालाई सुजनको किन “कसम मन पर्यो”
ठमेल बजार गीतबाट रातारात हिट भएकी मोडल एलिसा राई म्युजिक भिडियोका सबैभन्दा ब्यस्त मोडल हुन् । उनै एलिसाको अभिनय रहेको ‘भ्यालेन्टाइन डे’लाई लक्षित गर्दै ‘कसम मन पर्यो’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । गायक सुजन तिगेलाको स्वर रहेको गीतमा शब्द, संगीत र स्वर सुजनकै रहेको छ । भिडियोमा पनि उनि देखिएका छन् । गीतमा सुजनसंगै एलिशा राई पनि देखिएकी छिन् …
Viber Bi releases “Sunna Sakchau”
Featured, Fursad Filmy, Nepali Music News, Nepali Music Videos Comments Off on Viber Bi releases “Sunna Sakchau”
Viber Bi, popular rapper from GXSOUL, released his new single ‘Sunna Sakchau’ on Sunday. The song features singer Biraj Gautam and is produced by Chronicz Beatz.According to the press statement released by the singer,asubsequent music video for the song has also been released through the official YouTube channel of GXSOUL. The music video features the artists Viber Bi …
‘भन्नु पर्दा’मा दीपक र अन्जु
Featured, Nepali Music News, Nepali Music Videos Comments Off on ‘भन्नु पर्दा’मा दीपक र अन्जु
गायक जितेन लेप्चाको आवाज रहेको ‘भन्नु पर्दा’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । कुमार दुलालको शब्द रहेको गीतमा जितेन आफैले संगीत भरेका छन् । दीपक विश्वकर्मा र अन्जु चौलागाईं माथिनै भिडियो छायाँकन गरिएको छ । भिडियोलाई सिन्चुरी सुरेश धुमालले निर्देशन गरेका हुन् । मिलन शंखरले खिचेको भिडियो नेत्र गुरुङले सम्पादन गरेका हुन् ।
भूमिकालाई मलेसियामा सर्वाेकृष्ट गायिकाको अवार्ड
Featured, Nepali Music News Comments Off on भूमिकालाई मलेसियामा सर्वाेकृष्ट गायिकाको अवार्ड
चर्चित लोक गायिका भुमिका गिरी मलेसियामा सम्मानित भएकी छन् । उनले मलेरियामा आयोजित ‘हिमालयन इन्टरनेश्नल नेपाली म्युजिक अवार्ड’मा सर्वाेकृष्ट नव गायिकाको उपाधि जितेकी हुन् । पछिल्लो समय स्टेज क्विनको रुपमा चिनिएकी गायिकाको यो तेस्रो अवार्ड हो । उनले गीत संगीतबाटै स्वदेशका बिभिन्न अवार्ड समेत हात पारेकी छन् ।बिदेशमा अवर्ड पाउदा निकै खुसी भएकी गायिका गिररीले अवाडएले अगाडि बढ्न झन् हौसला प्रदान …
भन्द्रगोलकी रक्षा किन यस्तो अवतारमा ?
Featured, Nepali Music News, Nepali Music Videos Comments Off on भन्द्रगोलकी रक्षा किन यस्तो अवतारमा ?
हाँस्य श्रृखला भद्रगोलबाट चर्चामा आएकी अभिनेत्री रक्षा श्रेष्ठको दमदार अभिनय रहेको अर्काे गीत ‘जुन लुक्यो आकाशमा’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भिडियो गायक तथा संगीतकार तुला पर्वतले निर्देशन गरेका हुन् । सिएल शर्माका शब्द, संगीत र स्वरमा तयार भएको गीतको भिडियो सुन्दर नगरी पोखरामा छायांकन गरिएको हो ।गीतले आमा गुमाएकी छोरीको मर्मलाई बाबुको आँखाबाट ऐनाजस्तै छर्लग पारेको छ । …
६० कोरसले प्रियंका घेरिएपछि
Featured, Nepali Music News, Nepali Music Videos Comments Off on ६० कोरसले प्रियंका घेरिएपछि
अभिनेत्री प्रियंका कार्की अभिनित नयाँ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘सपनीमा आउनेलाई’ बोलको गीतमा अभिनेत्री प्रियंका कार्की ६० जना कोरसको बीचमा नाचेकी छन् । यति धेरै कोरस प्रयोग गरिएको सम्भवत यो पहिलो म्युजिक भिडियो हो । मेलिना राईको स्वर रहेको गीतमा दिपेन्द्रनाथ शर्माको शब्द र बसन्त सापकोटाको संगीत छ । महाराज थापाको एरेन्जमा तयार भएको गीतको भिडियो उत्कृष्ट लाग्छ …
गीत गाउन प्युठान पुगिन् राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वली
Featured, Nepali Music News, फुर्सद फिल्मी Comments Off on गीत गाउन प्युठान पुगिन् राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वली
‘स्वर्गद्धारी प्यूठान तेस्रो महोत्सव–२०७४’ मा सहभागि हुन हालै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएकी गायिका कोमल वेली पुगेकी छिन् । गुलाबी कलरको सारीमा सजिएर स्टेजमा पुगेकी वलीले प्रस्तुति राख्नु भन्दा पहिले सम्बोधन गरेकी थिइन् । सम्बोधनका क्रममा उनले भनिन्– ‘कलाकारिताबाट जनताको माया र साथ पाएको कारण आज म राजनीतिमा देशको सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रवेश गरेको छु । यो मेरो राजनीतिको पहिलो खुड्किलो हो । …
प्रेम भरिएका गीत सुनाईन अञ्जुले
Featured, Nepali Music News Comments Off on प्रेम भरिएका गीत सुनाईन अञ्जुले
‘जिन्दगी यो फुलै फुलको हुँदैन’ स्टेज चढ्ने वित्तिकै चर्चित गायिका अञ्जु पन्तले यही गीत गाइन् । जुन गीतले एका एक उपस्थित अतिथि तथा दर्शक वर्गमा मौनता छायो । पहिलो गीत पछि जव अञ्जुले ‘भ्यालेनटाइन–डे’को शुभकामना व्यक्त गरिन् तब दर्शकले आफूहरु पे्रममा डुबेको महशुस गरे ।‘भ्यालेनटाइन–डे’को साँझ गायिका अञ्जु बागबजारस्थित साया हेल्लो क्याफे गजलबारमा एकल साँझमा प्रस्तुत भइन् । प्रेम दिवश …
विकाश र स्मृतिको यो “कस्तो सम्बन्ध”
Featured, Nepali Music News, Nepali Music Videos Comments Off on विकाश र स्मृतिको यो “कस्तो सम्बन्ध”
गायक विकाश बैद्य र स्मृति श्रेष्ठको अभिनयमा रोमान्टिक भिडियो निर्माण भएको छ । विकाश बैद्यकै आवाज रहेको ‘कस्तो सम्बन्ध ’ बोलको गीत मािथ यो भिडियो बनाइएको हो । ‘भ्यालेन्टाइन डे’को अवसर पारेर सार्वजनिक भिडियोमा गायक स्वयमको शब्द तथा संगीत रहेको छ । भिडियोलाइ राहुल प्रधानले निर्देशन गरेका हुन् । चक्र महर्जनले छायांकन रहेको भिडियोमा राहुल प्रधानको संगीत संयोजन रहेको छ …